उडिरहेका करिब १५ सय चरा एक्कासी भुईमा बजारिएर मरे, वैज्ञानिकहरु नै चकित – live 60media
उडिरहेका करिब १५ सय चरा एक्कासी भुईमा बजारिएर मरे, वैज्ञानिकहरु नै चकित
आकासमा उडिरहेका चराहरु अचानक भकाभक जमिनमा खसेको दृष्य वास्तवमै अनौठो थियो । जमिनमा वजारिएर संसार छोड्दै गरेका चराहरुको संख्या पनि उदेकलाग्दो थियो । उडिरहेका चराहरु एक्कासी भुईमा बजारिँदै म’र्दै गरेका दृश्य देखेका मानिसहरुले त्यो भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् ।
त्यस्ता दृष्य यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल हुन थालेका छन् । ति दृश्यहरु अमेरिकाको फिलाडेल्फियाका हुन् । गएको २ अक्टोबरमा फिलाडेल्फिस शहरमा १ हजार ५०० चराहरु आकाशबाट भटाभट खसेको समाचारमा जनाइएको छ । आकाशबाट तल खसेका चराहरु मध्ये धेरैको म रे’को अन्तरष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख छ ।
सोही स्थानमा आजभन्दा ७२ वर्ष पहिला सन् १९४८ मा यस्तो घटना भएको बताइएको छ । फिलाडेल्फिस शहरमा आकाशबाट चराहरु किन खसे भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको छ । यो अचम्मको घटनाले वैज्ञानिक र अनुसन्धान केन्द्रहरु नै अचम्मा परेका छन् । अहिले सम्म त्यसको कारण खुलेको छैन ।आकासमा उडिरहेका चराहरु अचानक भकाभक जमिनमा खसेको दृष्य वास्तवमै अनौठो थियो । जमिनमा वजारिएर संसार छोड्दै गरेका चराहरुको संख्या पनि उदेकलाग्दो थियो । उडिरहेका चराहरु एक्कासी भुईमा बजारिँदै म’र्दै गरेका दृश्य देखेका मानिसहरुले त्यो भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् ।
← राता र चम्किला नङ हुने स्त्री हुन्छन् भाग्यशाली, नङ हेरेर आफ्नो भाग्य थाहा पाउनुस् !
सोमबार यी काम गर्नुहोस्, चम्किनेछ भाग्य ! →